थप ६९ जनामा संक्रमण पुष्टि, कहाँ कति ? - Everest Dainik - News from Nepal
थप ६९ जनामा संक्रमण पुष्टि, कहाँ कति ?
पोखराः गण्डकी प्रदेशमा थप ६९ जना संक्रमित थपिएका छन् ।
क्षयरोग उपचार केन्द्र, पोखरा र पोखरा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा, चितवन मेडिकल कलेज, चितवन र भरतपुर अस्पताल, चितवन गरिएको परिक्षणमा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाका २ जना महिला पार्कल्याण्ड अस्पताल, अमरसिंह चोकमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी (स्टाफनर्श) हुन् । लमजुङ जिल्लाको बेशीसहरका २ जना रिलायन्स फाईनान्समा कार्यरत कर्मचारी हुन् ।
याे पनि पढ्नुस पत्रपत्रिकाः विश्वभरका दुईतिहाइ हवाईजहाज ग्राउन्डेड, पार्किङस्थलकै अभाव
योसँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या २५१६ पुगेको छ ।